Ikhonsathi ye-Ebow | INDLELA · Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
NgoSeptemba 26 18:30 pm - 21: 30
« Ukusebenza: Amabali okwenza imephu ngokudityaniswa kweAutoplot | INDLELA
Njengenxalenye yenkqubo yeNdlela, umrepha u-Ebow (@ ebow.mp3) uza kwenza umdlalo othile kwindawo yakhe yokufaka iTempelhofer Feld.
// Umsitho uqala ngo-18: 30
Bhalisela itikiti lakho lasimahla lokuthatha inxaxheba Apha
Solo, kodwa njengelungu leGaddafi Gals, i-EBOW iqhekeza ngokuchasene nesini, ubuhlanga kunye nokuzonda abesini esinye. Ngo-2013 icwecwe lakhe lokuqala elithi “Ebow” lakhutshwa ngoDisko B. Ngo-2017 kwalandelwa “Ubunzima”, icwecwe lokuqala le-Ebow kwiProblembär Records / Seayou Entertainment kunye nerekhodi, ethathela ingqalelo ukwahluka koluntu lwethu.
I-albhamu yakhe yamva nje ethi "K4L" ("Kanak 4 Life", ekhutshwe nge-29 ka-Matshi 2019) inikezelwe kuluntu nakwintsapho (K4L), kubahlobo (Slang), kuluntu lwasebukhosini (amabhabhathane) okanye kumava okufuduka (AMK).
Ifoto nguJoanna Legid
INDLELA: IProjekthi yoThatho-nxaxheba loLuntu
Indlela yiprojekhthi yamacandelo ohlukeneyo enza ingxaki kubudlelwane phakathi kwemetropole kunye nomntu ovela kumbono wommeli kunye nowasetyhini. Iprojekthi iqulathe ufakelo lobugcisa eTempelhofer Feld, umboniso eOyoun, kunye nothotho lweziganeko phakathi naphakathi kweendawo zombini. Isihloko seprojekthi sivela kubugcisa be-Umut Azad Akkel obunamacala amaninzi kunye nesihloko esifanayo esiza kuboniswa ngeprojekthi.
Ngaba i-metropole ingasiqulatha ngalo lonke ixesha lokufuduka, ukugcwala, kunye notshintsho olukhawulezileyo lwedolophu? Kuthekani ukuba iindlela esihamba kuzo yonke imihla ziqala ukusuka naphi na kwaye azikhokeleli ndawo? Ngaba le nto sihlangabezana kunye okanye 'ubunye' bunokubakho? Zithini iziphumo, ezinye iindlela, izisombululo, kwaye inokuba yintoni indima yobugcisa kule nkqubo?
Jonga inkqubo epheleleyo ye-PATH Apha
Iprojekthi yePath yaveliswa nguOyoun ngokusebenzisana no-Umut Azad Akkel (IG: @azadonfires) njengegcisa, umlawuli wezobugcisa, kunye nomlungelelanisi, u-Şehnaz Layıkel (IG: @sehnazlayikel) njengomlungelelanisi kunye noPegah Keshmirshekan (IG: @pegah .keshmir) kunye no-Ilgaz Yalçınoğlu (IG: @ilgazyalcinoglu) njengabaququzeleli bemisitho. Ixhaswe ngemali yiLotto Stiftung kunye ne-UdK KKWV.
Nceda uqaphele: Ukuthatha inxaxheba kwimisitho e-Oyoun okanye undwendwele imiboniso yethu, kuya kufuneka ukuba ube novavanyo lwe-corona olubi ukusuka kwangolo suku okanye ubungqina bokugonywa / bokuchacha. Iimaski ze-FFP2 zinyanzelekile e-Oyoun kude kube kukwazisa esinye. Ulwazi oluthe kratya malunga nengqondo yethu yezempilo inokufumaneka Apha
26. gading marten
Nge-7 kaDisemba nge-20 ngokuhlwa - 21: 00